गायीका एन्जीला श्रेष्ठ ओ मेरो मायालु भनेर बोलाउदै कसलाई ?? थाहा पाउनुहोस् | EuropeNepal.Net
गायीका एन्जीला श्रेष्ठ ओ मेरो मायालु भनेर बोलाउदै कसलाई ?? थाहा पाउनुहोस्
00Europe Nepal Monday, August 10, 2015
Anjila Shrestha's New Video "O MERO MAYALU" on the Shooting Spot
मनोजको निर्देशनमा सपनाले बारुली कम्मर मकाउदैं कसलाई भनिन् ओ मेरो मायालु नव नायिका सपना के.सी ले आफ्नो बारुली कम्मर मर्काउदै मोड़ल अनिष शाहलाई "ओ मेरो मायालु" भन्दै सताएको म्यूजीक भिडियोमा देखिएको छ ।
गायीका एन्जीला श्रेष्ठले गाएको "ओ मेरो मायालु "बोलको आधुनिक गीत, म्यूजीक भिडियोमा सपना के.सी , अनिष शाह लगाएत अन्य कलाकार एरिक ,बरुण ,प्रमोद ,प्रकाश र रबिनले आफ्नो भूमिका देखाएका छन् ।
एम.जे मिडियाको प्रस्तुतिमा निर्देशक मनोज विष्टले निर्देशन गरेको उक्त म्युजिक भिडियोको छायांकन नेपालको बिभीन्न रमणीय स्थानहरुमा छायांकन गरिएको छ।
भिडियोको नृत्य निर्देशन भने प्रेमलाल श्रेष्ठ र केशब खड्का ले गरेका हुन्। रबिन्द्र श्रेष्ठले लेखेको "रिभाइबल" गीतको म्युजिक भिडियोलाई अमृत सुनुवारले खिचेका हुन् । भिडियो केही दिनमै सार्वजनिक गरिने निर्माण कम्पनी एम.जे मिडियाकोले जनाएको छ ।
EuropeNepal.Net: गायीका एन्जीला श्रेष्ठ ओ मेरो मायालु भनेर बोलाउदै कसलाई ?? थाहा पाउनुहोस्